» एमालेमा थपिने ५५ केन्द्रीय सदस्य नेपाल खेमाकै !
एमालेमा थपिने ५५ केन्द्रीय सदस्य नेपाल खेमाकै !
छान्ने जिम्मा रावल र पाण्डेलाई
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी विभाजनपछि रिक्त ५५ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल खेमाका नेताहरूमध्येबाटै गर्ने भएको छ ।
एमाले विभाजन भएसँगै दुबै पार्टीका नेताहरू एकले अर्को पार्टीका नेता तानेर केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
नेकपा (एस)ले पनि चाँडै केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने भन्दै सम्भव भएसम्म एमालेमा आवद्ध नेताहरूलाई तानेर केन्द्रीय सदस्य बनाउने प्रयास थालेको छ ।
नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक आज बस्दै